Hordhac: Ajax Vs Man United: Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Finalkii Xiisaha Badan Ee Dhex Mari Doona Kooxaha Ajax Vs Man United – Kooxda.com
Home 2017 May Europa League, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Ajax Vs Man United: Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Finalkii Xiisaha Badan Ee Dhex Mari Doona Kooxaha Ajax Vs Man United
Hordhac: Ajax Vs Man United: Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Finalkii Xiisaha Badan Ee Dhex Mari Doona Kooxaha Ajax Vs Man United
May 24, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 1
Garoonka Friends Arena ayaa marti galin doona kulanka sida weyn loo wada sugayo ee finalka Tartanka Europe League xilli ciyaareedkan oo ay isaga hor iman doonaan kooxaha Ajax Iyo Man United.
Kooxda Man United ayaa kulanka soo galaysa iyada oo isha ku haysa in ay kor u qaado koobkeedii ugu horeeyay ee tartanka Europe League.
Halka Kooxda Ajax lafeedu doonayso in ay qaado koobkan kadib markii ay ka maqnayd muddo 21 sano ah oo ayna ku guulaysan tartan Yurub ah.
Labada kooxood oo wareegii Semi-finalk ku soo kala jiidhay kooxaha Lyon iyo Celta Vigo ayaa wax walba u samayn doona sidii ay ugu guulaysan lahaayeen koobka.
Man United ayay koobkan kaga xirantahay rajo kale oo ah in ay iska xaadiriso tartanka champions League xilli ciyaareedka dambe.
Kulanka: Ajax Vs Man United
Tartanka: Europe League Final
Garoonka: Friends Arena Stockholm
Sanadkan ayaa ah markii ugu horaysay ee ay koox Holland ah gaarto Finalka Europe League tan iyo sanadkii 2002 wakhtigaas oo ay gaartay kooxda Feynoord.
Man United ayaa ah kooxdii 3-aad oo England ah oo gaarta Finalka Europe League iyada oo ay kaga horeeyeen kooxaha chelsea 2013 iyo Liverpool 2016.
Ajax ayaa Man United ka hor imanaysa markii 4-aad kulan ka tirsan tartamada yurub 2 jeer ayayna ka badisay.
kulankan ayaa ah kulankii 3-aad ee final ah ee ay isaga hor yimaadaan kooxo ka socda England iyo Holland iyaga oo ay horay isaga hor yimaadeen kooxaha Tottenham Vs Feyenoord iyo Ipswich vs AZ Alkmaar dhamaan kulamadaasina waxay ay ahaayeen intii aan magaca laga badalin.
Ajax ayaa markii ugu horaysa soo gaartay tartan Yurub ah tan markii ay Juventus ka qaaday finalkii champions league sanadkii 1995/1996.
Man United ayayna wax guuldaro ah soo gaarin 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee tartanka Europe League iyada oo 7 kulan badisay 3 kalena bar-baro gashay.
Tababare Jose Mourinho ayaa kooxda Ajax ka badiyay 6-dii kulan ee uu ka hor yimid intii uu tababaraha ahaa kulamadaas oo dhana waxa ay ahayeen tartanka champions leageu.
Filed in: Europa League, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino
Hal Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “Hordhac: Ajax Vs Man United: Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Finalkii Xiisaha Badan Ee Dhex Mari Doona Kooxaha Ajax Vs Man United”
Yaxye xassan May 24, 2017 at 1:21 pm · Edit
Ugu horeyn waa idin salaamay kooxda.com shaqada xoogan ad heesan mideeda kale mourinho guul ayaa ka goan swbtoo ah dhoor ciyaartooy ayuu siiyay nasiino kulamdii dambe sidoo kale man isku ciyaar ma ahan horyaalka iyo europe league ani waan ufiirsaday so that guul ayaa naga go’an viva mourinho guul caawa GLORY GLORY MAN UNITED